Fakan-tsary, mpanonta ary fahagola hafa avy amin'ny Apple | Vaovao IPhone
Raha mieritreritra momba ny vokatra Apple, solosaina finday, solosaim-birao, finday avo lenta, takelaka ary izao isika dia tonga ao an-tsaina ny finday avo lenta. Raha manitatra lavitra kokoa amin'ireo kojakoja vita amin'ny Apple ho an'ireo vokatra ireo isika dia afaka mieritreritra mpamily sy headset. Fa ny orinasa paoma izy io koa dia nikasika sokajy vokatra hafa nandritra ny tantarany: fakantsary, wevcams, mpanonta, scanner ary koa mpandahateny. Ny sasany amin'ireto vokatra ireto dia nilaozana satria tsy nanana fitaovana ilaina intsony, ny sasany satria tsy dia nahomby loatra, ary ny sasany satria tsy nahomby tanteraka.
Tamin'ny 1994 dia nanandrana nahazo toerana teo amin'ny tontolon'ny sary i Apple. Ny fakantsary nomerika voalohany, ny Apple QuickTake 100, dia nahitana fitehirizana Flash 1MB, famahana 640x480, ary flash, izay mitentina $ 749. Tamin'ny volana Mey 1995 dia nosoloina ny QuickTake 150, fakan-tsary iray mitovy aminy, afa-tsy ny efa nifanaraka tamin'ny Windows sy ny endrika sary mahazatra kokoa toa ny BMP sy JPEG. Nidina hatramin'ny 700 $ ny vidiny. Tamin'ny volana febroary 1997 ho avy ny maodely farany indrindra, QuickTake 200, miaraka amina endrika mahazatra kokoa ho an'ny fakantsary fakantsary, fitehirizana 2 na 4MB ary mitazona ny famahana ny 640 × 480. Na dia nampidina ny vidiny ho $ 600 aza izy, dia tsy nahatratra tarehimarika fivarotana tsara ary tamin'ny taona nanombohana azy dia nilaozana izy.
Tamin'ny 1995 no nahazoantsika ny Apple WebCam voalohany. Ny QuickTime Video Conferencing Camera 100 dia nifanaraka tamin'ny Power Macintosh tamin'izany fotoana izany ary efa nampiasa ny codec H.261. Mahavita mamoaka horonantsary, sary ary sary mbola, Amidy amin'ny ankapobeny dia amidy amin'ny fampiasana matihanina amin'ny vidin'ny $ 1800 ary io dia nahitana ny lozisialy ilaina amin'ny kaonferansa horonantsary sy fitaovana tanan-tanana hiresahana mitovy amin'ny telefaona. Tsy fantatra hoe oviana najanona io fa tsy bestseller ihany koa.
Ny maodely webcam an'ny Apple manaraka dia natao hiandry hatramin'ny 2003, miaraka amin'ny fanombohana ny iSight tsara tarehy. Fakan-tsary izay mampatsiahy ny famolavolana ny vokatra Apple ankehitriny, miaraka amin'ny kalitaon'ny sary sy ny feo ambony noho ny fakantsary tamin'izany fotoana izany nahatratra ny naoty ambony indrindra avy amin'ireo mpitsikera sy mpampiasa, na izany aza ny vidiny lafo ($ 149) dia nanakana azy tsy ho mpivarotra lafo indrindra. Ny fahatongavan'ireo fakantsary nampidirina tao amin'ny MacBook tamin'ny 2006 dia heverina fa nilaozana.
Apple dia nanana tantara lava teo amin'ny tontolon'ny mpanonta. Nandritra ny 20 taona dia nanamboatra sy nivarotra ireo kojakoja ireo ireo solosaina Mac. Ny mpanonta pirinty voalohany, Silentype, dia natomboka tamin'ny 1979 ary navoaka tamin'ny 1980.. Fanontana maharitra izay tena Trendcom Model 200 saingy manana ny Apple logo ary manova ireo singa anatiny mba hahamora azy. Mifanaraka amin'ny Apple II mahomby ary avy eo ny Apple III, dia azo hatramin'ny 1982.
Ny modely Ny LaserWriter tamin'ny 1985 dia iray amin'ireo mpanonta laser voalohany azo eny an-tsena, amin'ireo mpanonta printy lehibe tamin'ny fotoana nahalany efitrano iray. Na dia lafo kokoa aza (7000 $) noho ny maodely natolotry ny fifaninanana, toy ny HP, dia nandroso kokoa io ary ny fahafaha-mizara amin'ny tambajotra miaraka amin'ireo mpampiasa 16 dia nahatonga azy io ho tsara ampiasaina amin'ny orinasa.
Taorian'ireto maodely ireto dia niseho maro hafa, mamarana ny orinasam-pirinty ho an'ny Apple amin'ny LaserWriter 8500, izay mamela ny fanontana na dia amin'ny habe A3 aza. Nivoaka ny orinasa mpanonta i Apple tamin'ny taona 1999.
Apple koa dia niditra tao amin'ny orinasa scanner miaraka amin'ny modely samihafa. Tamin'ny taona 1988 dia nandefa ny Apple Scanner voalohany izy, miaraka amina 300 dpi ary grayscale ihany (16) ary nosoloana Apple OneScanner izy io, ary grayscale ihany koa fa misy 256 level. Tamin'ny 1991 tonga ny scanner miloko voalohany, Apple Color OneScanner, izay manana vahaolana hatramin'ny 4800 dpi. Nilaozana izy ireo tamin'ny 1997.
Talohan'ny nidiran'ny mpamokatra hanao mpandahateny mifanaraka amin'ny vokatra Apple dia nanamboatra ny azy manokana ilay orinasa. AppleDesign Powered Speakers no voalohany, narahina kinova faharoa amin'ny volondavenona sy volon-koditra miolakolaka kokoa. Ireo modely roa ireo dia samy manana input roa, hampifandray azy ireo amin'ny solosaina sy mpamaky CD, ohatra, ary nanana jack an-doha koa teo alohan'izy ireo. ny modely voalohany dia natomboka tamin'ny taona 1993, ary herintaona taty aoriana ny faharoa.
Taorian'ity fitsangatsanganana voalohany teo amin'ny tontolon'ny feo ity dia namoaka ny iray amin'ireo vokatra mampihomehy azy elaela i Apple: ny Apple Pro Speaker. Namboarin'i Harman Kardon Hita hatramin'ny volana janoary 2001 izy ireo ary, toy ny mahazatra amin'ny Apple, dia nifanaraka tamin'ny maodelin'i Mac ihany izy ireo, ary tsy azo ampiasaina amin'ny solosaina na fitaovana hafa.
Vitanay ny fanangonana ny "antitra" avy amin'ny Apple miaraka amin'ny iPod Hi-Fi, ny hany vokatra ato amin'ity lisitra ity izay hitako niasa sy nankafiziko. Ity mpandahateny mahay ity, novolavolain'i Bose, dia iray amin'ireo tsy fahombiazan'ny Apple farany, satria na eo aza ny endriny tsara tarehy, izay efa ho 10 taona no hifanaraka tsara ankehitriny, ny vidiny lafo (349 $) dia tsy nahatonga azy ireo hanaiky azy tsara. Tsara ho marihina koa fa ny manam-pahaizana dia tsy nanao fanamarihana tsara momba ny kalitaon'ny feo. Herintaona mahery no naharitra teny an-tsena, nesorina tamin'ny volana septambra 2007.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fakan-tsary, mpanonta ary antik hafa avy any Apple
Javichu dia hoy izy:
Nividy ny iPod HI-FI amidy aho ary nanomboka teo dia mbola lavorary sy tsara feo ary araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra dia tsy mifandona, endrika tsara kokoa noho ny maodely ankehitriny. Miaraka amin'ny iPod touch dia tsy navesatra izy io fa ny dock kosa mbola niasa fa nanampy Airport izay ampiasako azy amin'ny Airplay avy amin'ny Mac sy ny iPad dia tokony hiverina hanao mpandahateny misy efitrano maromaro izy ireo.
Mamaly an'i Javichu
Seng, multitasker mitovy amin'ny Auxo